Ra’isul Wasaare Khayre oo Ku Tamashlaynaya Garoowe- SAWIRRO/VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Ra’isul Wasaare Khayre oo Ku Tamashlaynaya Garoowe- SAWIRRO/VIDEO
Ra’isul Wasaare Khayre oo Ku Tamashlaynaya Garoowe- SAWIRRO/VIDEO
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre ayaa xalay booqday qaar kamid ah goobaha ay bushadu ku kulanto ee magaalada Garowe si uu u xog waraysto shacabka magaalada una ogaado, isaga oo sidoo kale tegay qaar kamid ah hoteelada iyo xarumaha ganacsiga magaalada.
Ra’iisul Wasaaraha oo dadka uu la kulmay ka dhagaystay talooyin iyo fikrado muhiim ah ayaa bogaadiyay wada shaqaynta ka dhexeysa shacabka iyo madaxdooda federaalka iyo nabad geliyada iyo horumarka ay iska kaashadeen.
Wuxuu sidoo kale ka qeyb galay afur sharafeed uu maamulka gobolka Nugaal u sameeyay wafidiga Ra’iisul Wasaaraha ee ku sugan magaalada Garowe.
Afruka Sharafeedka ay maamulka gobalku u sameeyeen ayaa waxaa Ra’iisul Wasaaraha ku wehliyay wasiirro xukuumadda ka tirsan, xildhibaanno, guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa Muqdisho iyo Mas’uuliyiin Kale.
Booqashooyinka iyo tamashlaynta uu Ra’isul wasaaruhu ku samaynayo caasimadda Garoowe ayaa imaanaysaa iyadoo madaxda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay weli ku heshiin laayihiin qodobada masiiriga ah ee dalka iyo xalinta khilaafaayada u dhexeeya labada dhinac.
Shirka Madasha wadatashiga Garoowe ayaa galay maalintiisii 5aad iyadoo ay jirin wax war rasmi ah oo ka soo baxay halka uu marayo shirka iyo waxyaabaha heshiiska laga gaaray iyo kuwa aan laga gaarin.